XOG: Ciidamada PSF-ta Puntland oo qabtay Sarkaal katirsan Al- Shabaab, kuna qabtay Boosaaso & Xog laga helay.
BOOSAASO(P-TIMES) – Warar dheeraad ah oo ay heshay PuntlandTimes ayaa daaha ka rogaysa in ay ciidamada difaaca Puntland ee PSF-ta oo inta badan la dagaalama kooxaha Argagixisada ee Daacish & Al- Shabaab, ayaa xalay gacanta ku dhigay sarkaal sare oo katirsan kooxaha Argagixisada, gaar ahaana Al- Shabaab, kaas oo mudo lagu daba joogay.
Laamaha Amniga ayaa hayay xogta ninkan, waxaana laga qabtay hotel kuyaala agagaarka dekeda magaalada Boosaaso, waxaana qabashadiisa gacan ka geystay la socodkiisa oo ay hayeen ciidamada Amniga.
Ciidamada ayaa hadda baaris ku haya xogtiisa, waxaana lafilayaa in maxkamad la horkeeni, waxaana sidaas oo kale soo baxaya in uu qeyb ka ahaa falal amaan darro oo kadhacay magaalada Boosaaso.
Saraakiisha Amniga qaarkood oo la hadlay PUNTLANDTIMES, kana gaabsaday magacooda ayaa xaqiijiyey in laamaha Ammaanka ay dabagal ku hayeen ninkan iyo xubno kale oo hadda qaarkood lagu raadjoogo.
Ciidamada PSF-ta ayaa habeenadii u dambeeyey howlgalo ka sameeyey gudaha magaalada Boosaaso, waxayna ku guuleysteen in ay soo qabtaan waxyaabaha qarxa, agabyo loo waday kooxaha Daacish & Al- Shabaab, waxaana muuqata in ay hadda ciidamadu dabagal ku hayaan kooxahan.
Dilal iyo qaraxyo ay Daacish & Al- Shabaab ka geystaan gudaha magaalada Boosaaso, sidaas oo kale si xoog leh ayay ganacsatada uga qaadaan lacago baad ah oo ay ku sheegaan Canshuur ama Zakawaad bil kasta la bixiyo.